"Ukungcamla kweSeychelles" kubhiyozela ukudibana okusemthethweni kokuqala kunye namaqabane e-UAE
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » "Ukungcamla kweSeychelles" kubhiyozela ukudibana okusemthethweni kokuqala kunye namaqabane e-UAE
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Ngesihlandlo sokuqala sokuhlangana ngokusemthethweni kukaMnu. Sylvestre Radegonde, uMphathiswa weSebe leMicimbi yezaNgaphandle kunye noKhenketho eSeychelles, kunye namaqabane okhenketho kuMbindi Mpuma, iOfisi yezoKhenketho yaseSeychelles yabamba umcimbi othi "Taste of Seychelles" eJumeirah Emirates Towers ngokuhlwa ngoLwesibini. , ngo-Oktobha 26.
Umnyhadala uquka abantu abanempembelelo kunye namanani aphambili amashishini avela kwi-UAE, kunye neendaba zosasazo kunye neemoguls, kunye namaqabane orhwebo.
Iindwendwe zithathwe kuhambo olumnandi nezimuncumuncu ezifana necoconut nougat, iitshiphusi zebhanana kunye neziselo zalapha ekhaya.
Njengoko izithintelo zokuhamba ziqala ukukhululeka kulo lonke ilizwe lama-Arabhu, abantu abaninzi bayakwazi ukuzibonela ngawabo imiba etyebileyo ngokwenkcubeko yaseSeychelles.
Bekunye noMphathiswa weSebe lezaNgaphandle kunye noKhenketho, abanye abameli bakarhulumente abohlukeneyo abavela eSeychelles bebezimase lo msitho. UMphathiswa woLutsha, iMidlalo noSapho, uMarie-Celine Zialor; uMphathiswa oMiselweyo kunye noMphathiswa wezokuLoba, uJean François Ferrari; USodolophu waseVictoria, uDavid Andre; kunye namanye amagosa aphezulu karhulumente aqaphelekayo avela iiSeychelles uzimanye noMphathiswa uRadegonde ekwamkeleni iindwendwe, eziquka inyambalala yabantu abanempembelelo kunye nosomashishini abaphambili abasuka kwi-United Arab Emirates, kunye namajelo eendaba awahlukeneyo, izikhulu zeendaba, kunye namaqabane orhwebo, kumsitho oqaqambileyo.
UMphathiswa ukwakhatshwe kulo msebenzi nguNobhala Oyintloko wezoKhenketho, uSherin Francis, kunye noMlawuli Jikelele weNtengiso yeNdawo yokuFikela, uBernadette Willemin, bobabini babekho ukuza kwamkela iindwendwe.
Ngalo lonke urhatya olumnandi noluntsonkothileyo, olwenzeka phambi koSuku lweSizwe lweSeychelles kwi-Expo 2020 eDubai, iindwendwe zathathwa kuhambo lokufumana ivumba elimnandi laseSeychelles, apho kwaphakwa izibiliboco ezinje ngecoconut nougat, iitshiphusi zebhanana kunye neziselo zasekhaya. ngelixa babehlanjululwa yi-vocalist yaseSeychellois u-Isham Rath kunye nomdlali weSaxophone uJean Quatre, amagcisa amabini adumileyo aseSeychellois.
Kwintetho yakhe, uMphathiswa uRadegonde uthe: “Njengokuba olu tyelelo lwam lokuqala kuMbindi Mpuma ndikwisikhundla sam njengomphathiswa wezokhenketho, ndingathanda ukubulela abantu baseUnited Arab Emirates ngobubele babo obumangalisayo. Ubudlelwane bethu ne-United Arab Emirates bebusoloko busondele kwaye bukhethekileyo. Okoko amaqhina ethu kulo mmandla aqala phantse kumashumi amabini eminyaka eyadlulayo, i-UAE ibe lelona lizwe liphambili kuMbindi Mpuma elityelela iziqithi zethu iminyaka elishumi ilandelelana. ”
Ethetha ngemiphumo yobhubhane eziqithini, uMnu. Radegonde uthe: “Sikukhuthalele kakhulu ukuthatha amanyathelo ayimfuneko ekuphumezeni iimfuno ezifanelekileyo zokuhamba ukuze sikwazi ukukhusela abemi bethu kunye nabatyeleli. Okuvuyisayo kukuba, ukuzibhokoxa kwethu kuye kwaba nemiphumo emihle. Okwangoku, malunga nama-72% abantu bethu baye bagonywa ngokupheleleyo. Ngale nto, ngoku singabhengeza ngokusemthethweni iSeychelles njengelizwe elikhuselekileyo kubakhenkethi. ”
Ethetha ngalo msitho, u-Ahmed Fathallah, Seychelles yoKhenketho Ummeli oseDubai, uthe: “Sichulumancile ngokwenene ngabantu abaninzi kulo msitho. Sithanda ukubulela iindwendwe zethu ezibekekileyo ngokufika apha namhlanje nangokwamkelwa ngokufudumeleyo kuMphathiswa uRadegonde kutyelelo lwakhe lokuqala olusemthethweni njengomphathiswa wezokhenketho kuMbindi Mpuma. Njengoko izithintelo zokuhamba ziqala ukuthomalalisa kulo lonke ilizwe lama-Arabhu, sinethemba lokuba abantu abaninzi ngakumbi bayakwazi ukuzibonela ngawabo iinkalo ezininzi zeSeychelles nezityebileyo ngokwenkcubeko.
I-avant-goût yamava aseSeychelles iyafumaneka kwabo bandwendwela indawo yokuhlala yesiqithi ekwi-EXPO 2020, uNksk. Francis uthe, “Kwabo banomdla wokufumana owabo 'Taste of Seychelles' apha eDubai, silapha. ndiyavuya ukubazisa ukuba ngoku bangakwenza oko ngokukhululekileyo kwindawo yemiboniso yaseSeychelles ekwi-EXPO.”
Ngaphantsi kwesiqubulo esithi 'Ukugcina iNdalo,' iSeychelles isebenzisa iqonga labo eliphakamileyo kwi-EXPO 2020 Dubai ukuqaqambisa iinzame ezenziwe ngamaqumrhu asekhaya nakwamanye amazwe ukukhusela ubutyebi bendalo baseSeychelles ngokugcina indalo ephilayo kunye neentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo kwezi ziqithi zintle.
“Ibiluvuyo olukhulu ukuthatha undwendwe lwethu lwase-UAE kolu hambo luhle lusiya kungcamla kwiziqithi zethu. Ibilixesha elifanelekileyo lokuba iqela leTourism Seychelles linxibelelane namahlakani ethu kushishino,” utshilo uBernadette Willemin.
Ngeendwendwe ezingama-18,000 ezirekhodwe zisuka e-UAE ukusukela ngoJanuwari ka-2021, ilizwe lesibini lomthombo wentengiso weSeychelles.